Tatitra COVID-19 ataon’ny media frantsay: tsinontsinoaviny ireo manampahaizana manokana avy amin’ny vitsy an’isa · Global Voices teny Malagasy
Ireo fotsy hoditra no mibahana ny sehatry ny fampahalalambaovao frantsay.
Voadika ny 21 Septambra 2020 13:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, українська, English
Ankizilahy iray manao arontava eny an-tratran-drainy. Saripika an'i Xavier Donat tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.5.
Dimy ambinifolo taona lasa izay, nisy boky iray be mpividy indrindra nosoratan'ilay mpahay fiarahamonina, Eric Maurin, Le Ghetto Français, nanoritsoritra ireo dingana tomponandraikitra amin'ny fanavakavahana ara-tsôsialy sy jeôgrafika mampiavaka ny fiarahamonina frantsay.
Toa mamerina manao izany dingana izany koa ve ny fahitalavitra frantsay izao? Matetika ampangaina ho manao fanavakavahana an'ireo vitsy an'isa, indrindra fa amin'ireo Mainty Hoditra, ary tsy nanitsy tena ny fahitalavitra frantsay. Ohatra iray mazava amin'izany ny fandrakofana ataony ny valanaretina COVID-19.
Ny 12 Martsa, tonga tamin'ny faratampony ny fanarahana azy : 35 tapitrisa ny olona nijery ny filoha Emmanuel Macron nanazava ny hoe nandray fanapahankevitra izy hampihatra ny fihibohana manerana ny firenena mba hanakanana ny fiparitahan'ilay coronavirus vaovao.
Avy hatrany, ireo fantsom-pahitalavitra goavana dia nanomboka nikarakara adihevitra lavabe niarahana tamin'ireo mpitsabo, mpikaroka sy ireo manampahaizana manokana amin'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ireo hôpitaly, fianarana na labaoratoara malaza ao Frantsa, Soisa ary Etazonia. An-tapitrisa maro ireo olompirenena no nihazona ny fofonainy nandritra ny nampitan'ireny manampahaizana manokana ireny, saika isanandro vaky, ireo tarehimarika fototra mety hampitonitony ny tahotr'izy ireo sy mety hanavotra aina maro.
Na dia mitondra fahalalàna aza, dia zavamisy mampanaintaina sy mampalahelo no navoitran'ireny adihevitra isanandro ireny : androany, ao anatin'i Frantsa ipetrahana foko marokarazana, manana fihodirana mitovy daholo ireo olona miseho fahitalavitra satria izy ireny no heverina ho ny mahay indrindra afaka manazava ireo olana manerana izao tontolo izao ary manolotra vahaolana ho an'ireo olon'ny tany iray manontolo. Samy fotsy hoditra daholo izy ireny.
Fifandrifian-javatra, tao anatin'ny tatitra fanaony isantaona momba ny ady fanoherana ny fanavakavahana, ny fankahalàna Jiosy ary ny Fankahalàna vahiny [pdf], ny Filankevipirenena Fakàn-kevitra momba ny Zon'Olombelona (CNDH), dia nanolotra ireo tohevitra goavana avy aminy ho an'ity taona 2020 ity:
Torohevitry ny CNCDH ho an'ny Filankevitra Ambony momba ny haino aman-jery (CSA) ny handrisihana ny fanehoana ireo lehilahy sy vehivavy mainty hoditra, tafiditra amin'izany ny any anaty asa ilàna fahaizana manokana.
Io torohevitra io dia tsy manao afa-tsy manamafy ireo fiampangàna efa an-taona maro nataon'ireo lahatsoratra am-polony, ireo gazety sy ireo tranonkala anaty aterineto : ny zavamisy dia matetika loatra ireo fantsom-pahitalavitra frantsay no tsy mampiseho ireo olomalaza nivoaka avy amin'ny vitsy an'isa mitàna toerana fitarihana mahomby. Zavatra manandanja izany satria ananan'ny fahitalavitra ny hery handrafitra lasitra miabo, ary araka izany dia hahafahan'ny tanora avy amin'ny fiaviana rehetra hanana fahatokiana amin'ny fahaizamanao ananany.
Manandrana manitsy ny fanabantiana efa an-jato taona natao tamin'ireo vitsy an'isa
Tonga saina i Frantsa, hery mpanjanaka fahiny, hoe tsy maintsy manao asa tsara amin'ny fampisondrotana sy fampiatiana ireo vitsy an'isa.
Tamin'ny 2013, nisy fanadihadiana iray notontosain'i Catherine Ghosn nampitahàny ny fanehoana ireo vitsy an'isa teny anaty fahitalavitra amerikàna, belza, britanika, kanadiàna ary frantsay. Voamarik'io mpikaroka momba ny Siansan'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisana io fa ireo politika frantsay amin'io sehatra io dia tsy mahomby sy tsy misy fiantraikany raha oharina amin'ny an'ireo firenena hafa nanaovana ilay fandalinana.
Tamin'ny 2007, ilay mpikaroka, Catherine Humblot, dia nahatsikaritra fa na nahavita ezaka aza i Frantsa tamin'ny fanehoana ireo vitsy an'isa tao aminy, mbola lavitra ny làlana hodiaviny. Manazava izy, ohatra, fa vao tamin'ny 2006 no nisy fantsom-pahitalavitra frantsay iray goavana nandray fanapahankevitra sahisahy ny hampiseho ilay mainty hoditra mpanao gazety, Harry Roselmack, mandritra ireo ora be mpanaraka indrindra – ary io dia vonjimaika ihany. Raha ampitahaina, tamin'io taona io ihany, araka ny nambaran'ilay Holandey mpanao gazety, Stefan de Vries, nitsahatra handeha hisotro ronono ilay vahivavy mainty hoditra voalohany indindra nitàna toerana mpanolotra vaovao tao amin'ny fahitalavitra holandey.
Izay hita ihany no azo inoana
Tamin'ny faran'iny taona lasa iny, Judy Woodruff, mpanentana ny fandaharana PBS Newshour, mandeha ao Etazonia, dia nanolotra [angl] tovovavy afro-amerikàna iray, i Elizabeth Wayne, injeniera momba ny biomédicale, tamin'ireto teny manaraka ireto :
Maherin'ny antsasak'ireo ankizy any amin'ireo sekoly amerikàna no tsy fotsy hoditra, saingy amin'ny ankamaroany dia fotsy hoditra ny mpampianatra an-dry zareo. [Izao alina izao] vehivavy afro-amerikàna iray amin'ny sehatra biomédicale no manazava amintsika ny antony maha-zavadehibe ny fijoroan'ny tena manoloana ny efitrano fianarana.
Hazavain'i Elizabeth Wayne, taorian'ny niainany toejavatra nahamarika azy nandritra ny fianarany teny amin'ny ambaratonga ambony, rehefa nanatrika kaonferansa iray izy ka nisy vehivavy iray mainty hoditra nandray anjara fitenenana tao :
Tsy tonga saina mihitsy aho hoe tsy nanana olona velively mitovy amiko, nampianatra ahy….hatrizay dia nihevitra foana aho fa izay hita ihany no azo inoana…
Taorian'izay ny zavatra hitan'i Elizabeth Wayne dia navoaka sy noresahana tanaty lahatsoratra nihoatra ny 700 isa. Ambarany fa ny sasantsasany tamin'ireo imailaka voarainy avy tamin'ny olona dia nivaky taminy fa : « Tsy mbola nahita velively aho vehivavy mainty hoditra azo sary nitafy akanjo fotsy (blouse) fitondra anaty labaoratoara noho izy nandray anjara tamin'ny fahitàna zava-manandanja. »
Mety hoe amin'ny endriny hafa mihitsy ve ny olan'i Frantsa ? Sa mety hoe zara raha misy ireo manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fisaboana no avy amin'ireo vitsy an'isa ao Frantsa ? Tsy voatery ho izay. Tamin'ny 2007, ny gazety mpiseho isanandro ao Frantsa Libération dia nitanisa tomponandraikitra iray ao amin'ny Firenena Mikambana, Habib Ouane, nihoraka hoe : « Betsaka ny Beninoà mpitsabo, raha tsy hilaza afa-tsy ny ao Ile-de-France monja, raha oharina amin'ny any Benin manontolo! »
Ary tamin'ny Aprily lasa teo ilay mpanao gazety, Majed Nehme, dia nanoratra hoe [angl] :
Araraotin'ny rafi-pitsaboana ao Frantsa ny fitobahana ben'ireo matianin'ny fahasalamàna avy any Afrika Atsimon'i Saharà, indrindra fa avy any Senegaly, Mali, Benin, Burkina Faso, Kôngô ary ireo firenena mampiasa sy miteny ny fiteny frantsay.
Mety misy antony mampalahelo manazava ny mahatonga ireo vitsy an'isa, indrindra fa ny mainty hoditra, ho tsy apetraka afa-tsy amina andraikitra iray voafaritra sy misy fitsaràna an-tendro efa miraikitra aminy ao amin'ny fahitalavitra frantsay. Mazava loatra, tena ilaina ireo lasitra lehibe avy amin'ireo vitsy an'isa any anatin'ireo fampialana voly, ary mazàna no mitolagaga amin'izy ireny ireo tanora avy amin'ny vitsy an'isa, amin'ny fahafantarany hoe indray andro any mba mety ho mpandray ny loka Oscar izy ireny na ho lasa atleta olaimpika manana ny lazany. Saingy mba manao ahoana ny amin'ireo tanora siantifika mahavelom-panantenana nivoaka avy amin'ireo vitsy an'isa, izay mety ho afaka hanampy hitady ny fanafody manaraka eo ?
Ireo mpilaza vaovao, indrindra fa ny fahitalavitra, dia mitàna anjara toerana lehibe amin'ny fomba fijerin'ny olona. Afaka manampy amin'ny famoronana lasitra miabo ho an'ireo ankizy avy amin'ny vitsy an'isa ny fahitalavitra, amin'ny fanampiana azy ireny handeha lavidavitra kokoa noho izay tsy ninoany velively.
Samy efa nandre isika ny tantaran'ilay « voromahery niaina ho toy ny akoho » [anlg] : rehefa nilatsaka avy eny amin'ny akàny nisy azy, dia nitontona tao anaty toerana fiompiana akoho ny voromahery iray, vetivety be izy dia voaray sy voataizan'ireo zanaka akoho tao. Nitombo izy ary nihevitra hatrany fa akoho. Indray andro izy dia nifanena tamina voromahery iray be taona noho izy, ary io no nampianatra azy nanidina sy nanampy azy hampivoatra ny tena maha-izy azy.
Ny politikan'ny fanavakavahana mitohy sy tsy mitsahatra ao amin'ny sehatry ny fahitalavitra frantsay dia hanakana, tsy hoe fotsiny ny fisondrotan'ireo lasitra miabo ho an'ireo vitsy an'isa, fa mety koa vao mainka hampitombo ireo fihenjanana sôsialy, amin'ny fampitambarana ireo ‘ghettos’ fahiny.